Pamusoro 5 Virtual Reality Mienzaniso Munyika Chaiyo - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Virtual Reality, VR maapp
Wepamusoro 5 Virtual Reality Mienzaniso Munyika Chaiye
Kuti uropi hwemunhu hugamuchire chakagadzirwa uye chaicho nharaunda seicho chaicho, tekinoroji iri kuuya kumberi ndiyo Virtual Reality. Virtual Reality inogona kunyatsotsanangurwa nezvinangwa zvairi kuda kuzadzikisa iko kunyudzwa kwakazara. Saka pano tiri kuisa zvimwe zvinoshamisa rakapotsa chokwadi mienzaniso yakagadzira nzira yavo. Asi tisati tachera mairi, ngatinzwisisei chii rakapotsa chokwadi zvinoreva.
izwi Virtual Reality zvinoreva padyo nechokwadi. Munhu anogona kuzounzwa neshanduro yechokwadi isipo chaizvo asi angati aripo mune chaiko nyika sekuona kwake. Kana ikaiswa mune zvehunyanzvi mazwi, Virtual Reality ndeye-matatu-mativi, makomputa-anogadzirwa nharaunda anogona kusangana nemunhu. Munhu wacho anova chikamu chenyika kana kuti akanyudzwa munzvimbo yakatendeseka uye nekudaro anokwanisa kubata zvinhu kana kuita zviito zvakateedzana.
Nezviri kutaurwa ngatienderere mberi nenzira dzinotemesa pfungwa Virtual Reality rinoitwa munyika chaiyo.
Read More: VR inoshanda sei?
Izvozvo Virtual Reality unotanga here? Wobva waisa maoko ako pakopi iyi ipo pano.
VR Mienzaniso & Nyaya Dzedzidzo:
Zvikuru mukana weVirtual Reality inogona kuchinja mabatiro atinoita tekinoroji yedu yedhijitari nhasi. Muchokwadi chii chiri nani pane kana isu tichidaro Virtual Reality iri kuita vanhu iyo deadpan tekinoroji. Asi ndizvo Virtual Reality inongogumira kumitambo seizvo vanhu vazhinji vanozviti ndizvo kana kuti zvinogona kuve nemhedzisiro yakakomba? Zvakanaka, ngationei.
1. VOLVO Chokwadi:
Iyo inotungamira mhando yemota, Volvo yakauya neimwe nzira itsva yekushandisa Google Kadhibhodhi. KuVolvo XC 90 Luxury SUV yavo, Volvo yakaita mushandirapamwe mukuru #volvoreality umo vakabvumira vashandisi kunyudza ivo pachavo mugomo rinofema rinotyisa zvese nekuitwa kwe Virtual Reality.
Volvo yakarongwa zvine hungwaru kune akati wandei mazinga ekugovera. Chiitiko chacho chakanyatsogadzirirwa Google Kadhibhodhi asi inowanikwawo pamidziyo yese ine vhidhiyo ruzivo chete. The Virtual Reality danho yakatorwa naVolvo yakavabatsira kuwana mamirioni ekuonekwa uye zvakare ivo kunze kwebhokisi kufamba kwakaburitswa mu PCMag.
2. Matterport 3D Nzvimbo:
Kupa yakasarudzika 3D zviitiko mune chaiyo mamiriro chikamu, Matterport inoshandisa Virtual Reality uye 3D nenzira yakanakisa inogoneka. Yayo nyowani nyowani yeimmersive midhiya inokoka vashandisi kuti vatore chaiwo mazendo uye kuongorora nzvimbo sekunge dziripo chaizvo. Sezvo mifananidzo yakadhindwa ndeyechinyakare uye rakapotsa chokwadi zvikamu mu360 madhigirii zvakare ari kutaura zvekare, Matterport inopa zvese mune imwechete chaiyo yekubata system ine musha mafambiro mukugadzirisa kwe4K. Zvakare, 3D visualizations inoitwa kuti iwanikwe online kana yeVR misoro senge Oculus Rift kana HTC Vive.
3. King's Koreji, London
Mukati memakore makumi mashanu apfuura, kugona kwesainzi, mushonga, uye hutano kwakawedzera zvakanyanya uye ne Virtual Reality kupinda musimba, indasitiri yezvokurapa iri kuwana nzira dzisingaperi dzekuvandudza. Kamwe kufamba kukuru kwakadaro kunotorwa neKing's College Clinical Research nzvimbo. Vanoshandisa hunyanzvi hwavo Virtual Reality Lab yekurapa varwere vane Bipolar Disorder. Iyo lab inoshandisa masensa ekufambisa anobvumira mushandisi kufamba nepakati penzvimbo inokonzeresa murwere kune imwe maitiro.
4. Tribeca Inonyudza:
Pakutanga Virtual Reality chaive chega uchitamba mutambo wacho trend. Asi ikozvino VR iri kuwana kusvika kwayo mune dzinenge marudzi ese evaraidzo. Ungave mimhanzi, bhaisikopo kana kungotamba chete, Virtual Reality iri kunze uko uye iri kuunza kusiyana kwayo munzvimbo yakakura.
Tribeca Film Festival navo Tribeca Inonyudza yakanyatsogadzira dent munzvimbo yeVR yekuvaraidza. Nayo Yechokwadi Arcade, mushanyi anogona kusainira mapurojekiti avanoda kuona mukati menguva ye3-awa yetikiti.
Zvakare, yekuwedzera kuwedzera kune yavo VR nzvimbo iri Tribeca Cinema360 izvo zvinobvumira vashandisi kuona 360-degree famba VR gutsikana munzvimbo yemabhaisikopo.
5. BetterCloud VR Kutora:
Ndiani angadai akafungidzira tekinoroji iyo yaingove yakaringana kune chikamu chemitambo inogona kushandiswa kushanya kwehofisi, kuhaya maitiro uye kusangana nenzvimbo yekushanda.
zvakanaka, ZvirinaniCloud akaita zvakafanana. Ivo neimwe nzira vaiziva kuti kana vanhu vazhinji vaigona kuona kwavo kuhofisi ambiance uye yakanaka tsika, zvakanyanya ivo vaizokweverwa kunyorera. Kusarudza kushandisa iyo nyowani yeVR tekinoroji pamusoro peshanyo dzehofisi, BetterCloud yakatora kurekodha yavo yega-360-vhidhiyo mavhidhiyo uye nerubatsiro rwechishandiso chavo chakashandura hofisi vibes kubva muvhidhiyo ichiita yakabatana uye inofambidzana mushandisi ruzivo.
Sezvo tekinoroji ichiita, yakawanda inoshandiswa Virtual Reality vari kutarisana. Iri kushandiswa mune akawanda verticals mune akasiyana siyana, kazhinji ichirovedzera maitiro ebasa uye kudzidziswa kana kuunza pfungwa nyowani kune chikamu chikuru chevateereri. Saka, zviri nyore kutaura kuita izvozvo Virtual Reality iri kuunza chimurenga chikuru uye zvirokwazvo iri pano kugara.